पूर्वराष्ट्रपति डा यादवद्वारा समवेदना व्यक्त
पर्सा । यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका यात्रुको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगञ्जमा आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले युएस बंगला विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरे ।
हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले ठूलो नभई असल व्यक्ति बन्न कार्यक्रममा उपस्थित रहेका विद्यार्थीलाई सल्लाह दिए । उनले असल व्यक्तिलाई समाज र राष्ट्रले खोजेर स्थान दिने भएकाले ठूलो हुने अभिलाषाभन्दा असल बन्ने सोचको विकास गर्न विद्यार्थीलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा उनले शिक्षित समाजले नै लोकतन्त्र बलियो र राष्ट्र समृद्ध बन्ने धारणा व्यक्त गर्दै मुलुकमा व्याप्त रहेको अशिक्षालाई समाप्त पर्न सबै एकजुट भई लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. भगवान् यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकास सिंह, प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मी, नेपाली काँग्रेस पर्साका जिल्ला सभापति अजयकुमार द्विवेदी, पूर्वसभासद् रामेश्वर रौनियार लगायतले विद्यार्थीले शिक्षा हासिल गरेपछि त्यसको सदुपयोग मुलुकभित्रै गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
अहिलेको विकासको ढाँचाले प्राकृतिक स्रोतलाई नष्ट गर्ने : पूर्वराष्ट्रपति यादव
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अहिले भएको विकासको ढाँचाले प्राकृतिक स्रोतलाई नष्ट गर्ने बताएका छन् । बारबरा फाउण्डेशनले आज यहाँ ‘बारबरा एडम्स खोजी पत्रकारिता पुरस्कार वितरण’ समारोह तथा ‘चुरे संरक्षण
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको सेवासुविधा बढायो
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई थप सेवासुविधा गराउने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप दुई वटा सवारीसाधनलगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषदको
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई १५ दिनभित्र घर छाड्न घरधनीको अल्टिमेटम
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको घर भाडा विवाद फेरी बल्झिएको छ । भाडाको घरमा बस्दै आएका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई १५ दिनभित्र घर छाड्न आग्रह गर्दै घर धनी रविभक्त विष्टले
निर्वाचनमा उद्योगी तथा पैसावालाले टिकट पाए : पूर्वराष्ट्रपति यादव
काठमाडौँ । पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गराउँदै जीवन्त बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने “ती तीन अंगबीच एक अर्काका सम्मानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने